पत्रपत्रिका बाट Archives - Page7of7- तितोपाटी
बि.सं. २०८५ बाट काठमाण्डु सहित हेटाैंडा र चितवनबाट तेलबाट चल्ने गाडी बिस्थापित गरिने
तितोपाटी डट कम - प्रदेश नं. ३ को सरकारले अागामी ०८५देखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतिमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने योजना अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ब्यापक रुपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगमार्फत तेलबाट चल्ने चल्ने गाडीको प्रयोगमा प्रतिवन्ध…
सर्वोच्च शिखर सगरमाथा ‘मलमुत्रको थुप्रो’
तितोपाटी डट कम - सरकारी अनुगमन फितलो भएकाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा मानव मलमूत्र र अन्य फोहोर थुप्रिँदै गएको पर्वतारोहण क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले बताएका छन्। पैँसट्ठी वर्षअघि आजकै (मे २९ तारिख) दिन एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलो पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए। त्यसपछि सगरमाथामा स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीहरू…